The Rohingya News Bank : 2021
Labels: 2021, en, Handmade Rifles, Myanmar self-defence group, News
ရိုဟင်ဂျာအရေး NUG မူဝါဒအပေါ် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် တဦး ရဲ့အမြင်
ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) က ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်လူနည်းစုများဆိုင်ရာ မူဝါဒ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အပေါ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ Cox's Bazar ဒေသက ဒုက္ခသည်စခန်းတခုအတွင်းမှာ နေထိုင် နေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တဦးက ကြိုဆိုတယ်လို့ ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။
Labels: ရိုဟင်ဂျာ, 2021, Audio, mm, NUG, သတင်း., ဦးအောင်မြိုင်
Guardian reporter in Bangkok
A protest against Myanmar dictator Min Aung Hlaing in Yangon in February. He has cracked down on dissent and ordered the arrest of dozens of journalists. Photograph: AFP/Getty Images
Labels: 2021, Article, Darkest Day, en, Myanmar Junta, News
Aid cuts ‘to leave 100,000 refugees without water’
PM faces rebellion after launching £4bn raid on overseas budget
TORY foreign aid cuts will leave 100,000 refugees without water and devastate health services for the world’s most vulnerable, campaigners have warned.
Prime Minister Boris Johnson was slammed by MPs on all sides for his decision to temporarily reduce foreign aid from 0.7 per cent of national income to 0.5 per cent, breakinga2019 manifesto committment in the process.
The government claimed that the reduction was reasonable given the economic disruption caused by the pandemic.
Labels: 2021, Aid cut, en, News, UK
2 Rohingyas killed in landslides
Two Rohingyas were killed in two incidents of landslides in refugee camps of Ukhiya and Teknaf upazilas yesterday.
The deceased are Rafique Allah, 32,aresident of Moynarghona camp-12 of Ukhiya, and Noor Hasina, 20, who lived in camp-21 in Whykong union of Teknaf upazila.
A portion of hill collapsed on Noor Hasina around 10:00am in the morning following heavy downpour in the Chakmarkool Rohingya Camp.
Labels: 2021, en, killed, News, Rohingya
ASEAN ကို အယုံအကြည် မရှိကြောင်း မြန်မာ စစ်အာဏာ သိမ်း ဆန့်ကျင်သူများပြော
ဇွန်လ ၄ ရက် နေပြည်တော်တွင် ASEAN အထူးကိုယ်စားလှယ် ၂ ဦးနှင့် စစ်အာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တွေ့ဆုံစဉ်
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) အထူးသံတမန်နှစ်ဦးနှင့် စစ်ကောင်စီအကြီးအကဲ မင်းအောင် လှိုင်တို့ နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ ချုံချင့်မြို့တွင် ASEAN-တရုတ် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးနေစဉ် ဒေသတွင်းသံတမန်ရေးအားထုတ်မှုကို အယုံအကြည် မရှိကြောင်း မြန်မာစစ် အာဏာသိမ်းမှု ဆန့်ကျင်သူများက ပြောသည်။
ASEAN သည် မြန်မာနိုင်ငံအကျပ်အတည်းမှ ထွက်ပေါက်ရှာရန် အဓိကကျသည့် နိုင်ငံတကာ သံတမန်ရေး အားထုတ်မှုကို ဦးဆောင်နေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံကလည်း ASEAN ၏ သံတမန်ရေး ကြိုးပမ်းချက်ကို ထောက် ခံကြောင်းပြောသည်။
Labels: 2021, ASEAN, mm, NUG, မင်းအောင်လှိုင်, သတင်း
NUG အစိုးရရဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မူဝါဒသဘောထားအပေါ် ALP ပါတီ ကန့်ကွက်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေး (NUG) အစိုးရရဲ့ ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့က ထုတ်ပြန်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မူဝါဒသဘောထားအပေါ် ကန့်ကွက်တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP က မနေ့က ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ရခိုပြည်မြောက်ပိုင်း မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အရေးကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သက်တမ်းနုနယ် သေးတဲ့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ အလျင်စလို မလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်လို့လည်း ALP ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ဆိုထားပါတယ်။
Labels: 2021, ALP, mm, NUG, မူဝါဒ, ရိုဟင်ဂျာ
NUG ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာမူဝါဒသဘောထားကို အမေရိကန် ကြိုဆို
ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ NUG ရဲ့ ကတိကဝတ်တွေကို ကြိုဆိုတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရသူ Ned Price က သူ့ရဲ့တွယ်တာမှာ ဒီကနေ့ ရေးသားထားပါတယ်။
“NUG ရဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုအား ဖြေရှင်းဖို့ ကတိကဝတ် ထုတ်ပြန်ချက်ကို အမေရိကန်က ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟ မြန်မာလူထုအားလုံးအတွက် ဆက်လက် ထောက်ခံအားပေးလျှက် ရှိပါတယ်” လို့ ပြောခွင့်ရသူ Ned Price က ပြောပါတယ်။
Labels: 2021, mm, NUG, ရိုဟင်ဂျာမူဝါဒ, သတင်း, အမေရိကန်
ရိုဟင်ဂျာအရေး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ မစိုးရိမ်ရန် NUG ပြော
ခေတ်အဆက်အဆက် ဖြေရှင်းမရသည့် ပြဿနာကို အလျင်စလိုလုပ်လျှင်၊ ဒေသအတွင်းအတူနေထိုင်ရမည့် သူများနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းမရှိဘဲ ဆုံးဖြတ်လျှင် ဆိုးကျိုးသာဖြစ်စေမည်ဟု ရခိုင်အမျိုးသားပါတီက သတိပေး သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ခြမ်းသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသော ရိုဟင်ဂျာများကို တွေ့ရစဉ်။ (ဓာတ်ပုံ − EPA)
ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးသွားရသူများကို ရိုဟင်ဂျာဟု အသိအမှတ်ပြုခေါ်ဆိုခြင်း၊ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းများအပေါ် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ မစိုးရိမ်ကြရန် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) က ဆိုသည်။
“ရိုဟင်ဂျာများကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူများကို စော်ကားနှိမ့်ချဖို့မဟုတ်ပါဘူး” ဟု NUG အစိုးရအဖွဲ့၏ လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်မျိုးမင်းက Myanmar Now ကို ပြောသည်။
NUG အစိုးရအဖွဲ့၏ ပထမဆုံးအကြိမ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ယမန်နေ့ (ဇွန် ၅) ညနေပိုင်းက အွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့် ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် ရိုဟင်ဂျာအရေးရပ်တည်ချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း NUG တာဝန်ရှိသူများက ထည့် သွင်းဖြေကြားခဲ့သည်။
Labels: 2021, mm, NUG, ရခိုင်တိုင်းရင်းသား, ရိုဟင်ဂျာအရေး
Myanmar: ASEAN’s Empty Diplomacy Is Costing Lives
This photo shows military training conducted by the Karenni National Progressive Party (KNPP) ethnic rebel group in Kayah State. (AFP Photo)
The regional bloc must support the growing calls foraglobal arms embargo on Myanmar. Words alone have failed to persuade the Myanmar military to stop killing and jailing its civilian opponents.
Both the United Nations Security Council (UNSC) and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) have called on the Myanmar military to cease its use of violence. The military defies these calls, and the killing spree and arbitrary detentions continue.
Labels: 2021, ASEAN, en, Myanmar, News, NUG, UNGA, UNSC
Govt to shift 80,000 more Rohingyas to Bhasan Char soon, seeks global help
As the government is set to shift 80,000 more Rohingyas to Bhashan Char soon, it has soughtamore active role of the international community to ensure all fundamental rights, including livable accommodation for the forcibly displaced Myanmar nationals.
Prime Minister's Principal Secretary Dr Ahmad Kaikaus made the call to the global community atameeting on the Rohingya issue at the Prime Minister's Office (PMO) today, confirmed PM's Deputy Press Secretary KM Shakhawat Moon.
Labels: 2021, Bhas Char Islan, en, News, Rohingya, Shift
Labels: 2021, en, Myanmar, News, NUG, Rohingya's right
20 Myanmar migrants arrested in Hat Yai
Twenty Myanmar nationals illegally entering Ranong from Kawthaung are arrested in Hat Yai district of Songkhla on Saturday. (Photo by Assawin Pakkawan)
SONGKHLA: Twenty Myanmar migrants were arrested in Hat Yai district on Saturday night, local media reported.
The arrests were made byacombined force of soldiers from the 5th Infantry Regiment, provincial and immigration police and administrative officials of Hat Yai district.
At about 8pm on Saturday, authorities searchedaBangkok-registered articulated lorry which stopped near Ban Rai village on Kanchanawanich road in tambon Ban Phru of Hat Yai district to pick up two Myanmar migrants. They found two other Myanmar migrants already in the lorry.
Labels: 2021, Arrested, en, Hat Yai, Myanmar Migrants, News, Thailand